सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेस आतुर छः सिंह – Bihani Online
५ पुस २०७४ ११:२३ December 20, 2017 bihani
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले निर्वाचनको प्रक्रिया पुर्‍याएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेस आतुर रहेको बताउनु भएको छ ।उहाँले कांग्रेसलाई अफ्ठ्यारो बनाउने बहानामा एमालेले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न लगाएको बताउनुभयो ।
‘कांग्रेस सत्ताका लागि लोभ गरेको छैन । सत्तामा जाने दलहरूले कांग्रेसलाई सत्ताको चार्ज लगाएका छन् । यो सबै गलत हो’, उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यादेश निर्वाचन अगाडि लगेको हो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्नेवित्तिकै एउटा निकास निस्कन्छ ।’
सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री बनेर बसेका दलका नेताहरूले नै कांग्रेसलाई नैतिकताको पाठ सिकाएकोमा नेता सिंहले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । ‘सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री छन् । चुनावमा जित्न पाएपछि नैतिकता र जिम्मेवारी नै भुल्छन् ।
त्यस्ता दलले कांग्रेसलाई नैतिकता सिकाउँछन्’, उहाँले भन्नुभयो ‘कांग्रेस सत्तामा बस्न चाहेको छैन । विधि र प्रक्रिया पूरा हुनेवित्तिकै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तर गर्छ । तर, राष्ट्रिय सभाको अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि छिटो निर्वाचन हुन्छ ।’
‘कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भएको कुरालाई पनि ढाकछोप गर्छन्’, कांग्रेस नेता सिंहल भने, ‘संघीय संसद नआइकन सरकार गठन हुन सक्छ ? सक्दैन । विवाह नगरी बच्चा जन्मिन्छ ? भन्नु जस्तै हो संसदविनै एमालेले सरकार बनाउँछु भन्नु । कांग्रेसले सत्ता छाड्न चाहन्छ । खेलको नियम सबैले मान्नु पर्छ ।’
सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले राजनीतिक र संवैधानिक संस्कारलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘आफै अबरोध गर्ने । अनि कांग्रेसलाई दोष दिने ?’, नेता सिंहले भन्नुभयो ‘नेताहरूमा घमण्ड पलाउनु हुँदैन ।’
प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले पाएको सिट संख्या अन्त्यन्तै निरासाजनक रहेको बताएका सिंहले भन्नुभयो, ‘समानुपातिकमा जनताको भोट आएको छ । जनताले कांग्रेसको नेतृत्व ठीक छैन । अब नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहितको मत दिएका छन् । यसलाई आत्मसात गरेर कांग्रेसलाई सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’
कांग्रेस अहिले बिरामी भएको उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेस बिरामी भएको छ । यसलाई सहि उपचार गरेर नयाँ जीवन दिनुपर्छ’, सिंहले भन्नुभयो ,‘समयमा सुधार गर्नु जरुरी छ । साभार ईमेजखबरबाट
भरतपुर-१९ को मतदान शुक्रबार हुने :आजदेखि मौन अवधि सुरु
प्रादेशीक महोत्सवको आज चौंथो दिन
राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानसेनापतिलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
नेपालमा एकैदिन २०३ जनाको मृत्यु, ८ हजार ५२० जनामा संक्रमीत थपिए
बद्रीलाई छुटाउन जनार्दनलाई ओलीको दवाव
वीरगन्जको ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागी, दुई जनाको मृत्यु